रुकुम जिल्ला माओवादीको ‘किल्ला’, ६ वटै स्थानीय तहमा विजयी
रुकुम, ४ जेठ– माओवादी जनयुद्धको अधार इलाका ‘रुकुम’ पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले पनि ‘माओवादीमय’ भएको छ । रुकुमका ६ वटै स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइरहँदा माओवादीले रुकुमको जत्तिको बलियो उपस्थिति अन्य जिल्लामा देखाउन सकेको छैन ।
रुकुममा आठविसको, मुसिकोट र चौरहजहारी गरी तीनवटा नगरपालिका तथा बाँफिकोट, सानीभेरी, त्रिवेणी, भुमे, पुथा उत्तरगंगा र सिस्ने गरी ६ वटा गाउँपालिका छन् । भुमे, पुथा उत्तरगंगा र सिस्ने भने प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँ पहिलोचरणको निर्वाचन भएन । त्यहाँ जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
आठविसकोट नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका गोर्खबहादुर केसी विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका धिरेन्द्र बटालालाई २०३४ मत अन्तरले पराजित गरेर केसी आठविसकोट मेयर निर्वाचित भएका हुन् ।
आठविसकोटमा माओवादीका केसीले ५६२९ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका बटालाले ३५९५ मत प्राप्त गरे । आठबिसकोटको मेयरका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिप्रसाद शर्माले २४३५ मत प्राप्त गरे ।
आठविसकोटको उपमेयरमा पनि माओवादी केन्द्रकै गीता नेपाली निर्वाचित भएकी छन् । नेपालीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी अनिता बुढालाई २४३१ मतले हराएर उपप्रमुखमा विजयी भएकी हुन् ।
माओवादीकी नेपालीले ५६१८ मत पाइन् भने कांग्रेसकी बुढाले ३१८७ र एमालेकी अमृता शाहले २७८५ मत पाइन् । आठविसकोट नगरपालिकाका कुल १४ वडामध्ये ११ मा माओवादी केन्द्र, २ मा कांग्रेस र एउटा वडामा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाको मेयरमा माओवादीका उम्मेदवार देबीलाल गौतम र उपप्रमुखमा प्रेमकु्मारी सुनार विजयी भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको मेयरमा पनि माओवादीकै विशाल शर्मा र उपप्रमुखमा राधा रोका विजयी भए ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा झक्कुप्रसाद घर्ती र उपाध्यक्षमा निर्मला विष्ट निर्वाचित भए । बाँफिकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा धर्मबहादुर केसी र उपाध्यक्षमा मनकला पुन तथा सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्षमा डोरबहादुर पुन र उपाध्यक्षमा इन्दिरा ओली निर्वाचित भएका छन् ।
जेठ ४, २०७४ मा प्रकाशित
यी हुन् नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव [नामावलीसहित]
नेकपा जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न, ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको लाग्यो टुंगो
नेकपा एकता प्रक्रिया : सुनिँदै माधव नेपालको माग, बालुवाटारमा गोप्य बैठक
नेकपा धनुषामा दुईतर्फी तनाव- एक जनालाई किन सचिव भएँ, अर्कोलाई किन भइनँ ?
नेकपाले 'टाइपिङ मिस्टेक' गर्दा सिराहामा सचिव को भन्ने अन्योल !
संसद्‌मा पहिलो पटक बोलिन् चिन्तावती बुटवल- प्रदेशसभा शुरू भएको झण्डै १५ महिनापछि पहिलो पटक बल्ल सांसद चिन्तावती कुर्मी वर्मा संसदमा बोलेकी छन् । संसदमा चुइक्क नबोल्ने सांसद भन्ने शीर्षकको समाचार लोकान्तर डटकममा प्रकाशित भएपछि ...
राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलले बेलायत छोड्ने, अफ्रिकामा बस्ने अनुमान
यस्तो बन्यो सैनिक मुख्यालय, राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् उद्घाटन
रिना बस्नेत प्रकरण : तनावग्रस्त पथरी बजार ६ घण्टापछि खुल्यो
आईपीएलमा बाजी हारेपछि युवकले गरे आत्महत्या